I-NIU iveza i-eScooter yayo efanelekileyo yombane, i-N1 | Iindaba zeGajethi
Kule meko siza kuthetha ngenkcazo ye Isikuta sombane kunye nesikrelekrele, i-NIU N1. Le scooter inemoto yeBosch, iibhetri zePanasonic kunye nonxibelelwano lweVodafone, ke yongeza eyona nkampani ilungileyo kwezi ndawo ukufumana indawo yentengiso yombane.
Ngoyilo olungqongqo kunye netekhnoloji ye-state-of-the-art, i-N1 sisisombululo esifanelekileyo kwabo bafuna enye indlela yokuhamba esixekweni. Ukongeza, esi sithuthi sinekhathalogu enkulu yezixhobo, kokubini isithuthi kunye nomniniyo kwaye eyona ilungileyo kuko konke oko Ixabiso likhuphiswano kakhulu.
I-NIU yakhawulwa kwasekuqalekeni kwayo njengenkampani yetekhnoloji eyona njongo yayo iphambili kukunciphisa ifuthe lokuhamba okufunyanwa ziidolophu zangoku ngokunikezela ngee-Smart eScooter eziphambili kwihlabathi kwaye, ngo-2015, ukumiliselwa kwe-N1 iye yaba lelinye lawona maphulo anempumelelo ekubuyiseni abantu kwihlabathi ukufumana i-11 yezigidi zeedola kwiintsuku ezili-15.
Kule meko, ikwanazo nezincedisi ezifanelekileyo ezisuka ngasemva nasemacaleni angasemva, kunye noyilo olufanayo kunye nemibala, ukuxhasa i-smartphone okanye isiciko somlenze. Kwezi nyanga zimbalwa zizayo, izincedisi ezitsha ziya kufika eSpain, ngeenjongo zokubonelela ngabanini be-N1 ngaphezulu kokukhetha ukwenza i-eScooter yabo ngendlela abayithandayo.
1 Ezinye zeenkcukacha zayo eziphambili
2 Malunga nenkampani
Ezinye zeenkcukacha zayo eziphambili
Inkqubo yokuqhekeza evumayo evumela ukuba iphinde ihlaziye ukuya kuthi ga kwi-6% yebhetri xa unyathela
Iindlela ezintathu zokuqhuba: Eco (18km / h), eyiyo (35km / h) kunye neMidlalo (45km / h). Ukongeza ekunciphiseni isantya esiphezulu, iindlela zokuqhuba zinikezela ngokuhanjiswa kwamandla okuhlukeneyo (ukukhawulezisa)
Ulawulo lweenqanawa: ukucofa iqhosha kugcina ukukhawulezisa okungapheliyo. Izikhombisi zivaliwe ngokuzenzekelayo: ekupheleni kwexesha lokujika izalathi zicima ngokwazo (njengemoto)
Ukukhanya okrelekrele: kubandakanya ukukhanya kweepaneli zolawulo kwiphaneli yokulawula, elawula ubukhulu bazo zonke izibane zezithuthi ngokusekwe kukukhanya okukufutshane.
Inkqubo yokulwa ubusela ene-alamu njengesiqhelo (ulawulo olukude). Kubandakanya iiseti ezi-2 ezigqibeleleyo zesitshixo + kude
Isinxibelelanisi se-USB, ibhokisi yeglavu kunye ne-hook yokugcina
Imibala efumanekayo: Mhlophe, Mnyama, Matte Mnyama, Bomvu kunye noMnyama Grey
Ixabiso lale No scooter liqala kwi- € 1. I-2.899% yeVAT ifakiwe kwixabiso kwaye libekwe ngqo kwindawo yokhuphiswano, ngokufanelekileyo ixabiso alibandakanyi ukubhaliswa, irhafu yendlela okanye i-inshurensi enyanzelekileyo.
Kulabo abangayaziyo, i-NIU yinkampani ye-1 ye-Smart eScooter emhlabeni kwaye ineqela lezinto ezininzi ezivela kwiinkampani njenge-BMW, ​​iMicrosoft, iVolkswagen, iHuawei, iMcKinsey, iKKR kunye neBain Capital; bonke bazibophelele ekutshintsheni ukuhamba kwedolophu kwihlabathi liphela. Kule meko, i-brand's eScooter yaziswa e-Barcelona kwaye nangona iyinyani ukuba le nkampani intsha eSpain, yoyisile ilizwekazi lase-Asiya nelaseYurophu ngaphezulu kwe-500k yeeyunithi ezithengisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-NIU iveza i-eScooter yayo efanelekileyo yombane, i-N1